Kiiska Caasha Ilyaas Aadan Oo Waji kale Yeeshay iyo Nin Qirtay inuu Kufsaday – Goobjoog News
Kiiska Caasha Ilyaas Aadan Oo Waji kale Yeeshay iyo Nin Qirtay inuu Kufsaday
Maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta u fariisatay dhageysiga kiiska la xiriira kufsigii iyo dilkii loo geystay Caa’isha Ilyaas Aadan,hase ahaatee arrintii ayaa waji kale yeelatay markii uu maxkamadda horteeda nin ka qirtay inuu kufsigaas geystay.
Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame ayaa maanta Maxkamadda sare ee Puntland ka hor qirtay in uu ka qeyb qaatay kufsiga Caasho, hal marna uu “u galmooday”.
Sidoo kale wuxuu sheegay in falkaas ay kula jireen nin kale, oo aan wali gacanta lagu soo dhigin iyo mid maanta maxkamadda lala geeyay.
Maxamed Xareed, oo ah xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee Puntland oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in qirashada Cabdifataax ay isbaddal ku keentay kiiska Caa’isha Ilyaas Aadan.
Kiiska isugu jira falka Kufsiga iyo dilka ah ee loo geystay Alle ha u naxariistee Caa’isha Ilyaas Aadan ayaa soo jitamayay ku dhawaad 6 bilood, iyadoo dhageysigii maxkamadda sare ee maanta uu ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa ah.
Xoogga Dalka Oo Hawlgal Ka Fuliyey Deegaanka Camaara
Akhriso: Ajendaha Shirka Istaraatiijiyadda Wacyigelinta Qaranka Ee Muqdisho